Politika momba ny tsiambaratelo | safidy
Fangaraharana tanteraka amin'ny safidy
Miezaka mafy izahay hiantoka ny fiarovana tsara indrindra ny angon-drakitrao sy ny fiarovana anao ary mampiasa fitaovana isan-karazany ny fenitra farany hametrahana izany ho an'ireo mpitsidika sy mpikambana ato amin'ny tranokala. Anisan'ireo zavatra hafa dia mitsikera tsy tapaka ireo atiny amin'ny pejy ho an'ny viriosy sy ny malware, ary koa ny tranonkala iray manontolo ho an'ny karazan-cookies rehetra. Fitaovana fiarovana hafa no miantoka fa ny fidirana amin'ny tranokala ataon'ny olona tsy nahazo alàlana dia atao sarotra rehefa azo.
Mbola ilaina ihany koa ny fitaovana hafa mba ahafahan'ity pejy ity hiasa araka ny tokony ho izy: miaraka amin'ireo fiasa sy safidy maro mety tsy ho tsikaritrareo amin'ny fijerena azy aloha, toy ny fahaizany manombana ireo lahatsoratra amin'ny alalany, mba hahafahan'izy ireo ampiasain'ny hafa avy eo. azo atolotra ho tena ilaina.
Ny fanazavana rehetra omena eto dia avy aminay Fepetra fampiasana mifameno ary tokony ho takatra ho fanambarana mahazatra izay ekenao amin'ny fampiasana anao.
Raha manana fanontaniana na ahiahy momba an'io ianao na lohahevitra momba ny fiarovana data, azafady mba hifandraisa aminay amin'ny redaktion [AT] dieoption.at. Azonao atao ny manova ny toe-pisotroan-cookie ao ambany any. Tompon'andraikitra amin'ny fiainana manokana amin'ity tranokala ity Option Medien e.U., Helmut Melzer, ao amin'ny A-1070 Vienna. jereo fisian'ny.
Ity fiantrana ity dia tokony hoheverina ho ampahany amin'ny tolotra amin'ny Internet, izay anaovana fitenenana tao amin'ity tranokala ity. Raha tsy ara-dalàna na ara-dalàna ny fizarana na ny voambolana tsirairay, ny faritra hafa amin'ny antontan-taratasy dia tsy voakasik'izany resaka momba ny votoatiny sy ny fahitsiana.
Andraikitra amin'ny atiny amin'ity tranokala ity
Ny atin'ny pejinay dia noforonina tamim-pitandremana lehibe. Amin'ny maha tambajotra sosialy anefa, dia misy votoaty avy amin'ny olona samihafa, andrim-panjakana ary loharano ivelany. Raha ny marina, ny fahafenoana ary ny foto-kevitry ny votoatiny, noho izany dia tsy afaka mitana andraikitra isika. Amin'ny maha mpanome tolotra (hoster) antsika dia tompon'andraikitra amin'ny atiny manokana amin'ireto pejy ireto izahay araka ny lalàna ankapobeny. Na eo aza izany dia tsy adidintsika ny manara-maso ny mombamomba ny andiany fahatelo na nafindra na notehirizina na nanadihady toe-javatra izay mety hanaporofo fa misy tsy fanarahan-dalàna. Ny adidy manala na manakana ny fampiasana ny fampahalalana eo ambanin'ny lalàna ankapobeny dia tsy misy iharan'izany. Na izany aza, ny adidy amin'ity lafiny ity dia azo atao afa-tsy amin'ny fotoana hahafantarana ny fandikan-dalàna manokana. Raha fampandrenesana ny fanitsakitsahana tahaka izany, esorinay avy hatrany io atiny io.
Andraikitra rohy mankany amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo
Ny tolotra ataonay dia misy ihany koa rohy mankany amin'ireo tranonkala ivelany. Izahay koa dia tsy manana fiantraikany amin'ny votoatiny amin'ireo tranonkala ivelany ireo. Noho izany tsy azontsika atao ny mametraka andraikitra amin'izany atiny ivelany izany. Ny votoatin'ny pejy mifamatotra dia andraikitry ny mpamatsy na ny mpikirakira takelaka tsirairay. Ny famerenana tsy an-kiato sy feno ny votoatin'ny pejy mifamatotra dia tsy mitombina raha tsy misy porofo mivaingana amin'ny fanitsakitsahana araka ny lalàna. Raha fantatsika ny fanitsakitsahana dia hanaisantsika avy hatrany ireo rohy.
Ny mpandraharaha amin'ity tranonkala ity dia manandrana mandrakariva ny zon'ny hafa na ny fampiasana ny asa-varotra sy tsy misy fahazoan-dàlana. Ireo mpampiasa ny vohikala dia adidy ihany koa hanomezana antoka ny mpikirakira ny momba ny andraikitra (jereo koa Fepetra fampiasana). Ny votoatiny noforonin'ny mpandraharaha tranokala ary miasa amin'ity tranokala ity dia zon'ny mpamorona. Ny fandraisana anjara avy amin'ireo antoko fahatelo dia voamariky ny toy izany, ny mpanoratra dia aseho raha arakaraka ny rakitsoratra. Ny fanavaozana, fanodinana, fizarana ary karazana fanararaotana ivelan'ny fetra amin'ny zon'ny mpamorona dia mitaky ny fankatoavana an-tsoratra an'ny mpanoratra na mpamorona tsirairay. Ireo fampidinana sy dika mitovy amin'ity tranonkala ity dia natao ho an'ny tsy miankina sy tsy fampiasana ara-barotra ihany.
Ny mpamatsy serivisy (na hoster na mpamatsy) dia manangona sy mitahiry fampahalalana eo amin'ny mpizara tranonkala, toy ny browser, systeme d'exploitation, takelaka fanondroana, adiresy IP, fotoana fidirana, sns. Ireo data ireo dia tsy azo atolotra ireo olona manokana raha tsy mandinika loharanom-baovao fanampiny ary averinay ny famaritana izany tsy mivoaka koa raha tsy misy ny fampiasana tsy ara-dalàna ny tranokalanay.
Politika momba ny tsiambaratelo amin'ny fampiasana ireo fitaovana sy endri-javatra ary votoatin'ny antoko fahatelo
Ao amin'ny tranokalanay dia mitambatra ny asan'ny serivisy samihafa. Ireo asa ireo dia atolotry orinasa tsirairay avy. Amin'ny fampiasana ireo fiasa dia hampifamatotra amin'ny kaonty tsirairay ny pejin-tranonkala hitsidika anao ary zaraina amin'ireo mpampiasa hafa. Atoana ny data, dia alefa any amin'ireo orinasa voatonona ihany koa ny angona. Nomarihinay fa amin'ny maha mpamatsy tranonkala azy dia tsy fantatsika ny mombamomba ny angon-drakitra nampitaina ary ny fampiasan'izy ireo nataon'ireo orinasa voatonona ireo. Ny fampahalalana fanampiny dia azo jerena ao amin'ny politika momba ny tsiambaratelo an'ny orinasa nomena. Azonao atao ny manova ny toe-javatra manokana momba ny fiainana manokana ao amin'ny kaontin'ireo orinasa nomena anarana. Ankoatr'izay, mifandraika, atiny ivelan'ny tranokala amin'ity loharano mpamatsy mpamatsy hafa ity. Ny adiresy IP anao dia halefa toy ny hoe ao amin'ny tranokalan'ity mpamatsy ity. Nasongadinay fa amin'ny maha mpamatsy tranokalanay azy dia tsy fantatsika ny mombamomba ny angon-drakitra nampitaina ary ny fampiasan'izy ireo nataon'ireo orinasa voatonona ireo. Afaka mahita fampahalalana momba ny mpamatsy antoko fahatelo ianao amin'ny faran'ny pejy ity na miaraka amin'ireo mofomamy.
Ny tranonkalantsika dia mampiasa ny asan'ny serivisy momba ny serivisy tranonkala Google. Amin'ity tanjona ity, ampiasaina ny mofomamy manome alalana ny famakafakana ny fampiasana ny tranonkala ampiasain'ny mpampiasa anao. Ny fampahalalana vokatr'izany dia alefa any amin'ny mpizara ny mpamatsy ary voatahiry ao. Azonao atao ny misoroka izany amin'ny alàlan'ny fananganana ny navigateur mba tsy hisy cookies misy voatahiry. Nofarananay ny fifanarahana momba ny fanodinana data mifandraika amin'ny mpamatsy. Ny adiresy IP anao dia hosoratana fa pseudonymized avy hatrany. Vokatr'izany dia eo amin'ny toerana misy henjana ihany no azo atao. Ny fanamboarana angon-drakitra dia miorina amin'ny fitsipika ara-dalàna.
Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny tranokalanay amin'ny alàlan'ny tranokalanay. Amin'ity dia mila ny adiresy imailaka sy ny fanambaranao ianao fa manaiky ny famandrihana amin'ny bokotra. Rehefa nanoratra anarana ianao, handefa mailaka fanamafisana anao izahay miaraka amin'ny rohy hanamarina ny fisoratana anarana. Azonao atao ny misoratra anarana tsy ho amin'ny takelaka amin'ny fotoana rehetra, ohatra eo amin'ny faran'ny isaky ny takelaka. Azonao atao ihany koa ny mandefa ny fanafoanana anao amin'ny adiresy mailaka nomena etsy ambony. Hofoananay avy hatrany ny data-nao misy ifandraisany amin'ny fanaparitahana ny gazety.
Amin'ny fotoana rehetra dia manana alalana hampahalalana momba ny angon-drakitra voatahiry momba ny olonao ianao, ny fiaviany sy mpandray azy ary koa ny tanjon'ny fitahirizana. Azafady mba andefaso mailaka izahay amin'ny adiresy mailaka nomena azy.
Complianz Mandinika matetika ny tranonkalantsika ho an'ny karazana mofomamy rehetra ary manome anao ny fahalalanao izay fampiasan'ny cookies sy ireo serivisy izay ampiasain'ny antoko fahatelo.
About izany: EU, USA, UK
Koa satria ny safidy dia manolotra endri-javatra isan-karazany, be dia be ny isan'ny mofomamy, saingy tsy mila manahy ianao. Ohatra: ho an'ny fiasa hahafahana manombatombana ny anjara biriky iray, ilaina ny mofomamy iray misaraka isaky ny anjara. Ny mofomamy miaraka amin'ity anarana ity mazàna dia tsy voasokajy. Navoaka ihany koa, ny atiny ivelany dia manondro pejy voalohany, ary mila mofomamy. Azonao atao ihany koa ny mahita izany fampahalalana izany ao anaty lisitry ny mofomamy.
Amin'ny lafiny iray, mampiasa mofomamy fivoriana, izay voadona irery amin'ny faharetan'ny fampiasana ny tranokalanay, ary amin'ny lafiny hafa, cookies maharitra, mba handraisana vaovao momba ireo mpitsidika tonga matetika ao amin'ny tranokalanay. Ny tanjon'ny fampiasana ireo mofomamy ireo dia ny hahafahanao manolotra torolàlana mpampiasa tsara indrindra ary hahafantatra ireo mpitsidika ary afaka manolotra tranokala mahaliana sy votoaty mahaliana amin'ny fampiasana matetika.
Ny fampiasana ny tolotra omena dia azo atao ihany koa raha tsy misy cookies. Azonao atao ny manadino ny fitehirizana ny cookies ao anaty navigateur, mametra azy ireo amin'ny tranonkala sasantsasany, na mametraka ny navigateur web (Chrome, IE, Firefox, ...) hampandre anao rehefa alefa ny mofomamy. Azonao atao ny mamafa ny cookies ihany koa amin'ny kapila mafy an'ny PC amin'ny fotoana rehetra. Azafady, azafady, fa amin'ity tranga ity, ny fampisehoana voafetra voafetra ao amin'ny pejy sy ny fitarihana mpampiasa voafetra afaka andrasana.
Ny antsipirian'ny orinasa sy ny fanambarana momba ny fiainana manokana:
Cookiebot - https://www.cookiebot.com/ms/privacy-policy/